चीन--प्लाई सिंथेटिक छाना अन्डरलेमेन्ट कारखाना र निर्माताहरू शाइनिंगप्लास्ट
--प्लाई सिंथेटिक अन्डरलेमेन्ट
--प्लाई सिंथेटिक छत अन्ड ...
शाइनिंगप्लास्ट--प्लाई सिंथेटिक छत अन्डरलेमेन्टले तपाईंको बहुमूल्य छतको लागि राम्रो सुरक्षा दिन्छ, यसमा काम गर्ने छतहरू पनि। हामीले एन्टिस्किड र बलियो उद्देश्यका लागि नयाँ प्रविधि अपना्यौं जसले छानामा राम्रो कर्षण र पैदल ढु .्गा उत्पन्न गर्दछ।
तौल: ~० ~ १ g० जीएसएम
संरचना: La तह - SBPP + LDPP + HDPP + LDPP
बुनाई: पानी जेट करघा र गोलाकार तान
रंग: SBPP सहित ग्राहकको अनुरोध अनुसार
आकार: 48 '' X 250 '42' 'X 250'
मुद्रण: Colors रंग सम्म
: सेल्फ-चिपकने तपाईंको लागि विकल्प हो
SBPP र PP / PE बुनेका निर्माता दुबैको प्राकृतिक फाइदाको लागि मात्र layer-लेयर सिंथेटिक अन्डरलेमेन्ट मात्र होईन। हामी ट्र्याक्शन बढाउनको लागि SBPP लेयरमा विशेष डिजाइन गरिएको ढाँचा / एम्बोसमेन्टमा मद्दत गर्दछौं र यस मार्फत तपाईंको ब्रान्ड पनि पोलिश गर्नका लागि।
हामी छत डेक र कपडा बिचमा घर्षण बढाउनको लागि विशेष ईलास्टोमर योजकको साथ विशेष चमक-समाप्त ब्याकसाइड प्रयोग गर्दछौं। हामी अन्तर्निहित एन्टिस्किडको दुबै पक्षहरू बनाउनेछौं।
शाइनिंगप्लास्ट अन्डरल्यामेन्टको स्थायित्व छत सामग्री वितरकहरूको लागि अर्को बलियो सुविधा हो। पारंपरिक पानी जेटको तुलनामा हामीले तान्ने र अश्रु नयाँ तहमा पुगेको निश्चित गर्नका लागि हामीले बुन्न विधि सुधार गर्‍यौं।
प्रत्येक तहमा उन्नत UV उपचारले हाम्रो अन्तर्निहितलाई लामो अवधिमा यूभी एक्सपोजर अन्तर्गत राम्रोसँग स्थिर गर्दछ।
१. कागज वा पीपी कोरमा कडा लपेटिएको।
२. शिपिंगको बखत कडा होल्ड गर्न विशेष डिजाइन बाध्यकारी
Special. विशेष डिजाइन गरिएको प्यालेटाइजेसन (युएस वा ईएन मानक प्यालेटहरू)।
P. PE लपेटो संग कडा।
Urable टिकाऊ: शाइनिंगप्लास्ट अन्डरलेमेन्ट कडा र टिकाऊ हो। विशेष गरी योसँग कडा आँसु बल छ। यसले छानालाई च्यातिएको भागबाट चिप्लनबाट बचाउनेछ।
• हल्का वजन: शाइनिंगप्लास्ट सिन्थेटिक अन्डरलेमेन्टको एक हल्का सम्पत्ति छ जुन छतहरू द्वारा बोक्न सजिलो बनाउँदछ।
• एन्टिस्किड: कर्षण बढाउनको लागि SBPP तहमा विशेष डिजाइन गरिएको ढाँचा / embossment। हामी छत डेक र कपडा बिचमा घर्षण बढाउनको लागि विशेष ईलास्टोमर योजकको साथ विशेष चमक-समाप्त ब्याकसाइड प्रयोग गर्दछौं। हामी तपाईंको छेउमा अन्तर्निहित एन्टिस्किडको दुबै पक्षहरू बनाउँछौं।
• मौसम प्रतिरोधी: यार्न एक्सट्रुजसनको शुरुवात चरणदेखि, हामी हरेक बेबी यार्नको हेरचाह महान एनीलिaling्ग र ड्रइ by अनुपातबाट थाल्छौं, र हामीले उन्नत तानहरूद्वारा बुनाउँदछौं, टि-डाइ कोटिंगमार्फत यो समाप्त नभएसम्म, र यसले सबैलाई राम्रो संकुचन दर सुनिश्चित गर्नेछ। , राम्रो टेन्सिल / टियर र राम्रो डेलेमिनेसन। तपाईंको façade सुरक्षा आश्वासन दिईन्छ कडा हावा वा खराब मौसमको बखत पनि।
• आँसु प्रमाण: केवल पूर्ण तन्काइएको प्लेसमेन्ट मात्र होईन, शाइनिंगप्लास्ट अन्डरलेमेन्ट ट्र्यापेजॉइड टिअर सामर्थ्य द्वारा अश्रु-प्रमाण हुनेछ।
• जलरोधक: यति धेरै प्वालहरू र टेपहरूको बिचमा स्पेसि Un विपरीत, शाइनिंगप्लास्ट शीर्ष बुनाई क्वालिटीले प्रत्येक ईन्चलाई कपडाको पानीको पानी बनाउँदछ।
• यूवी प्रतिरोधी: हामीले उत्तम UV उपचार र स्टेबलाइजर प्रयोग गर्‍यौं दीर्घकालीन UV एक्सपोजरको बेला स्थिरिकरण सुनिश्चित गर्न।
• पिल र स्टिक चिपकने उपलब्ध छ
उन्नत तातो पग्लन टेक्नोलोजीले हाम्रो ग्राहकहरूलाई थप विकल्प / प्रकार्य प्रदान गर्दछ जुन स्वयं चिपकने वाला अन्डरलेमेन्ट हो। Adhesive ब्यान्ड तपाइँको अनुरोध को रूप मा अनुकूलित किया जा सकता है।
अघिल्लो: --प्लाई हाउस र्याप
अर्को: हल्का शुल्क पाली टार्प